Burma Strange News (Burmese Version): May 2011
မြန်မာ သံရုံးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ information တွေကို လွယ်လင့်တကူ ရှာဖွေ နိုင်တဲ့ ၀က်ဆိုက် တစ်ခု တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာသံရုံးနဲ့ မဖြစ်မနေ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ သံရုံးရဲ့ အဓိက ကျတဲ့ အချက်အလက်တွေကို http://myanmar-embassy.info မှာ ကြိုတင် သွားရောက် လေ့လာ ထားသင့်တယ်လို့ BSN ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ဦးက လက်တို့ ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြေးဆွဲလျက် ရှိသည့် တက္ကစီများတွင် မီတာများကို တက္ကစီများ လှပစေရန် အတွက်လည်းကောင်း၊ တက္ကစီ၏ အဆင် တန်ဆာ အဖြစ်လည်းကောင်း တပ်ဆင် ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မီတာများမှာ အလှပြထားခြင်းသာ ဖြစ်သဖြင့် တက္ကစီခများကို ပါးစပ်ဖြင့် ဈေးဖြတ်ကာ မောင်းနှင်ကြပြီး၊ အလှသဘော တပ်ဆင်ထားသော မီတာများကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုတလော တက္ကစီခ များမှာလည်း ၁၀၀၀ တန်ခရီးကို ၁၅၀၀ ကျပ်၊ ၁၅၀၀ တန်ခရီးကို ၂၀၀၀ ကျပ် စသည်ဖြင့် ဈေးတက်နေကြောင်း Myanmar Post ဂျာနယ်တွင် ရေးသားထားသည်။
Posted by BS News at 1:09 AM3comments
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူ လုပ်ကြံခံရပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့်အတူ လုပ်ကြံခံရပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဦးသန့်အား
အာဇာနည်ကုန်းတွင် ဤသို့ ဂူသွင်း သင်္ဂြိုဟ်ထားသည်။
(Photo: Screen-shot from niknayman's youtube)
ကုလ သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်သည် ၁၉၇၄ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် နယူးယောက်မြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ၁၉၄၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အတူ ကျဆုံး ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း SBS ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်သည့် City Hunter ဇာတ်လမ်းတွဲမှ ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခု အရ သိရသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အာဇာနည်ကြီးများနှင့် အတူ ကျဆုံး ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဦးသန့်အား ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည်ကုန်းတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် အတူ ဂူသွင်း မြှုပ်နှံထားသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်က ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဦးသန့်သည် ၁၉၆၁ မှ ၁၉၇၁ အထိ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် မည်သို့ မည်ပုံ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သနည်း ဆိုသော မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မဖြေရှင်း နိုင်သေးသော ခေါင်းခဲစရာ ပြသနာ တစ်ရပ် အဖြစ် တည်ရှိနေကြောင်း ပရလောကနှင့် ပန်းကန်ပြားပျံ လေ့လာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်နေကြသည်။
ဦးသန့် ဓာတ်ပုံ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးကွဲမှု ရုပ်ရှင်
ရန်ကုန် အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးကွဲမှု မူရင်း သမိုင်းမှတ်တမ်း အမှန်
Posted by BS News at 10:40 PM 1 comments
ထိုင်း သတင်းစာ နှစ်စောင်တွင် မည်သည့် သတင်းမျှ ပါဝင်တော့မည် မဟုတ်
ထိုင်းနိုင်ငံမှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် နေ့စဉ် ထုတ်ဝေလျက် ရှိသော နာမည်ကြီး Bangkok Post နှင့် The Nation သတင်းစာကြီး နှစ်စောင်တွင် သတင်းများ ထည့်သွင်း ဖော်ပြခြင်း ပြုတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
သတင်းများ လုံးဝ ဖော်ပြတော့မည် မဟုတ်သဖြင့် Bangkok Post နှင့် The Nation တို့ကို "သီတင်းစာ" ဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်လိုက်သည်။ အဆိုပါ "သီတင်းစာ" များတွင် "သီတင်းသီလ" ဆောက်တည်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ဘုရားကျောင်းကန် များတွင် "သီတင်းသုံး" နေကြသော ရဟန်းတော်များ၏ ထေရုပ္ပတ္တိများ ကိုသာ ဖော်ပြတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း "သီတင်းစာ" ၏ အယ်ဒီတာများက BSN ကိုပြောသည်။ သီတင်း တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက် ထုတ်ဝေသဖြင့် "သီတင်းစာ" ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ မည်သည့် သတင်းမှ ပါဝင်တော့မည် မဟုတ်သဖြင့် Bangkok Post နှင့် The Nation တို့သည် "သတင်းစာ" များ မဟုတ်ကြတော့ကြောင်း အဆိုပါ အယ်ဒီတာများက ပြောဆိုလိုက်သည်။
Posted by BS News at 8:09 PM 1 comments
ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စက်မှု နိုင်ငံကြီးကို တည်ဆောက်နေသည့် အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် အသစ် တီထွင် ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် "ဆိုင်ကယ်ဟု ယူဆရသော ယာဉ်" တစ်မျိုးကြောင့် လူတစ်ဦး အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် သတင်းဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
Posted by BS News at 7:43 PM 1 comments
Posted by BS News at 11:26 PM2comments
မူလတန်း ကျောင်းသား တစ်ဦးအား တစ်နေ့လျှင် ၁ ကျပ်၊ ၃၁ ပြား နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့လျက်ရှိ
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်တာလုံး အတွက် မူလတန်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံတော်မှ ငွေကျပ် သန်း ၂၄၀၀ တန်ဖိုးရှိ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် တွေ့ရသည်။ မူလတန်း တက်ရောက်နေသူ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား စုစုပေါင်းမှာ ၅ သန်းကျော် ဖြစ်သဖြင့် တစ်ဦးလျှင် တစ်နှစ်တာ အတွက် ထောက်ပံ့ခံရသည့် ငွေကြေး ပမာဏမှာ- ၄၈၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တစ်ဦးချင်းကို တစ်နေ့လျှင် ၁ ကျပ် ၃၁ ပြားနှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
Posted by BS News at 9:29 PM 1 comments
မိုးကြိုးကို ခုန်ရှောင် နိုင်သော အံ့သြဖွယ် မိန်းကလေး
ရန်ကုန် ဒဂုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ၃၄ ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမပေါ်ရှိ victory 48 အင်တာနက်ဆိုင် အင်္ဂါညနေ ၄ နာရီခန့်တွင် မိုးကြိုးထိမှန်သဖြင့် အနည်းဆုံး ကွန်ပြူတာ ၅ လုံး ပျက်စီးခဲ့သည်။
“မိုးကြိုးပစ်တော့ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တံခါးဝကနေ အလင်းတန်းတခု ဝင်လာတယ်၊ မိုးကြိုးပေါ့။ စက်နံပါတ် ၂ မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကောင်မလေးက ကြောက်လို့ ခုန်လိုက်တာ စက်နံပါတ် ၄ ကိုတောင် ရောက်သွားတယ်။ ကွန်ပြူတာ ၅ လုံးက ချက်ချင်းပိတ်သွားတယ်” ဟု အဆိုပါဆိုင်ရှိ ပျက်စီးသွားသည့် ကွန်ပြူတာများကို ပြန်ပြင်ပေးခဲ့သူ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
Posted by BS News at 8:34 PM0comments
Posted by BS News at 10:13 PM2comments
Posted by BS News at 10:43 PM 13 comments
စလေမြို့မှာမွေးဖွားပြီးနာမည်ကြီးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့နာမည်မှာ ဇာတိမြို့အမည် "စလေ" ကိုဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြထားကြပါတယ်
အဖဦးမြတ်စံ အမိဒေါ်လှရင်တို့မှ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၇၄-ခုနှစ် (မူကွဲ- ၁၁၇၈) တွင်ဖွားမြင်သည်။
ဦးပုည၏ ရေသည်ပြဇာတ်မှာ ထင်ရှားသည်။ စလေဦးပုညကို မြန်မာတို့၏ ရှိတ်စပီးယား ဟုပင် တင်စားကြသည်။ ၁၂၂၈-ခုနှစ် မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်းတွင် အခါတော် ပေးမိသဖြင့် ဖမ်းဆီး ခံထားရစဉ် မြို့ဝန် ဦးသာအိုး လုပ်ကြံ၍ ကွယ်လွန်သည်ဟု မှတ်တမ်း အချို့က ဆိုသည် (Click)။
တန်နက်မင်း ကို မြင်းချေးကန်သို့ တွန်းချလုပ်ကြံပြီး ပုဂံတွင် မင်းဖြစ်လာသူ ဟု ဆိုသည်။ စလေငခွေး မင်းဖြစ်သောအခါ သူမုန်းသောလူများကို ရေကန်ထဲသို့ချ၍ ဆင်ပေါ်မှနေပြီး လှံနှင့်ထိုးသတ်သည်။ သတ်ဖန်များလျှင် ပြည်သူလူထုက မခံနိုင်၍ စလေငခွေးအား ဆင်နှင့်တကွ ရွှံ့နွံဗွက်အိုင်ထဲသို့ တွန်းချပြီး ရွှံ့လုံးများ၊ ကျောက်ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်သဖြင့် အသက်ကုန်သွားသည် (Click)။
Colonel Sir Edward Sladen (1827-1890) (Click)
စလေမြို့ဇာတိ ဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည် မောင်ဒင် ဖြစ်သဖြင့် စလေဒင် ဟု အမည်တွင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ရာထူး ရရှိခဲ့သဖြင့် ကာနယ် စလေဒင် ဟု လူသိများသည်။ ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်ဘက်မှ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၈၈၅ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ တတိယ စစ်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးအရာရှိချုပ် (chief political officer) အဖြစ်ဖြင့် သီပေါမင်းကို နန်းချရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
King Thibaw talking to Colonel Sladen, Burma, 1885
အဆိုတော် အဲလ်ဗစ် ပရက်စလေ
Elvis Presley (1935-1977) (Click)
အမည်ရင်း ပရက် ဖြစ်သည်။ အဆိုတော် တွံတေး သိန်းတန်၊ ဟင်္သာတ ထွန်းရင် တို့ကို အားကျ သဖြင့် အဆိုတော် ဖြစ်သောအခါ မိမိအမည်နောက်တွင် စလေမြို့ကို ထည့်သွင်းပြီး၊ ပရက် (စလေ) ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်မင်းသား ၀င်ဦးကို အားကျသဖြင့် ၀င်းဦးစတိုင်ကို အစအဆုံး ခိုးယူခဲ့သည်။ ပရက်စလေ၏ ရုပ်ရှင်များနှင့် ၀င်ဦးရုပ်ရှင်ကားများကို နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရှုပါက ၀င်းဦး ဒီဇိုင်းများကို ပရက်စလေက ခိုးယူထားကြောင်း သိသာ ထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။
သင်္ကြန်ပန်းကုံးနဲ့ ပရက်စလေ (Photo: freemusic07.ucoz.com)
ငယ်စဉ်ဘဝက အလွန်ဂျေးထူသော ပရက်စလေ
သရုပ်ဆောင် ဝက်စလေ စနိုက်
Wesley Snipes (1962- ) (Click)
ချိုင်းမွေးထူတဲ့ ၀က်စလေ စနိုက်
စလေမြို့ဖွား၊ ပေသည်၊ တေသည်၊ ကြမ်းတမ်းသည်။ ၀က်နှင့် တူသဖြင့် မောင်ဝက်ဟု ခေါ်ကြသည်။ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာသောအခါ မွေးရပ်ဇာတိ စလေမြို့ကို ဂုဏ်ပြုယင်း ၀က်(စလေ) ဖြစ်လာသည်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ စလေမြို့တစ်ခွင် နေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင် စနိုက်ကျော်ရောင်းပြီးဝမ်းစာရှာခဲ့ရသဖြင့် ယနေ့အထိအသားပြန်မဖြူတော့ပေ။
သို့သော် စနိုက်ကျော်ရာင်းခဲ့သည့် ဘဝကိုလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ရလေအောင် သူ့နာမည်မှာ "စနိုက်" ကိုပါ ထည့်သွင်းလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀က်(စလေ)စနိုက်ဟု အမည်တွင်နေသည်။
Posted by BS News at 6:22 PM0comments
Posted by BS News at 10:49 PM 19 comments
ကလေးထောင်တွင် ကလေးများ မဟုတ်ဘဲ လူကြီးများ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေ
ကလေးထောင်တွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်က ဆိုသည်။ ကလေးထောင်ဖြစ်သဖြင့် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသူများမှာ ကလေးများ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရသော်လည်း လူကြီးများ ဖြစ်နေသည်ကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရသည်။ မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် ကလေးထောင်တွင် ကလေးများကို မထားရှိဘဲ လူကြီးများကို ယခုကဲ့သို့ ထားရှိခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်း မရှိကြောင်း မြန်မာ့အရေး စောင့်ကြည့်သူများက ဆိုသည်။
Posted by BS News at 10:23 PM2comments
နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရှုရန် ...
မူရင်း ၀ါကာ ၀ါကာ
Posted by BS News at 1:16 PM5comments
ကေအိုင်အေ (KIA) မှ ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အများပြည်သူကို အသိပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ၀က်ဆိုက် တစ်ခု လွှင့်တင်လိုက်သည်။ NLD မှ ၀က်ဆိုက် လွှင့်တင်ပြီးနောက် KIA မှ ယခုကဲ့သို့ ၀က်ဆိုက် ထူထောင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
KIA အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်ကို www.kia.in.th တွင် ၀င်ရောက် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
Posted by BS News at 12:15 PM2comments
မြန်မာပြည်မှ အလုပ်သင် ဆရာဝန်များ လစာ ၁၂၈၀ ကျပ် ရရှိ
မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သင် ဆရာဝန်များ အနေဖြင့် လက်ရှိအနေအထားတွင် တစ်လလျှင် လစာငွေ ၁၂၈၀ ကျပ် ရရှိကြောင်း The Voice Weekly တွင် ဖော်ပြချက် အရ သိရသည်။ အလုပ်သင် ဆရာဝန်များကို တစ်ရက်လျှင် ၄၂ ကျပ် ၀န်းကျင် နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အလုပ်သင် ဆရာဝန်များ၏ နှစ်ရှည်လများ အကုန်အကျခံလာရသော ငွေကြေးများနှင့် ကြိုးစား လာရသော အချိန်များကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ယခုကဲ့သို့ တစ်နေ့လျှင် ၄၂ ကျပ် ၀န်းကျင် ချီးမြှင့်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နောက်ဆုံး ရရှိသည့် သတင်း အရ အလုပ်သင် ဆရာဝန်များ၏ လစာကို အဆ တစ်ရာ နီးပါးအထိ တိုးမြှင့်ပေးသွားရန် ရှိသည် ဟု The Voice Weekly တွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း မည်သည့် အချိန်တွင် တိုးမြှင့်မည် ဆိုသည်ကိုမူ မသိရပေ။
Posted by BS News at 12:03 PM2comments
Posted by BS News at 11:56 PM 1 comments
Posted by BS News at 11:08 AM 1 comments
Posted by BS News at 7:11 PM2comments
Posted by BS News at 3:55 PM 1 comments
Posted by BS News at 12:43 PM 1 comments
Posted by BS News at 10:31 PM 11 comments
နေပြည်တော်တွင် ဗုံးမကွဲစေရန် မြန်မာ့မီးရထားက ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပေါက်ကွဲခဲ့သော ရန်ကုန်-မန္တလေး ရထားပေါ်မှ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် နေပြည်တော်ဘူတာ တွှင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားစေရန် ချိန်ကိုက်ဗုံး ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း၊ နေပြည်တော်တွင် မပေါက်ကွဲအောင် မြန်မာ့ မီးရထားက စနစ်တကျ စီမံ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မီးရထား တာဝန်ရှိ အကြီးအကဲ တစ်ဦးက BSN သို့ ပြောပြသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ရထားတွေက ထွက်ချင်တဲ့ အချိန်ထွက်ပြီး ဘူတာတွေကို ရောက်ချင်တဲ့ အချိန်ရောက်ပါတယ်။ နေပြည်တော် ရထားဆိုက်ချိန် နဲ့ ချိန်ကိုက်ပြီး ဗုံးထောင်တော့ ဘယ်ရမလဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့ရထားတွေ ဘူတာ ဆိုက်ရောက်ချိန်က ပေါက်တတ်ကရ ဆိုတော့ သူတို့ ချိန်ကိုက် တွက်ချက်တာ မအောင်မြင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီအရေးတွေကို ကြိုမြင်လို့၊ အရေးကြီး နေရာတွေမှာ ဗုံးမကွဲနိုင်အောင် အတွက် အခုလို ရထားတွေကို ထွက်ချင်တဲ့ အချိန်ထွက်၊ ၀င်ချင်တဲ့ အချိန်ဝင်၊ ရထားတွေ အချိန်မမှန်အောင်၊ ဆိုက်ရောက်ချိန် ပေါက်ကရဖြစ်အောင် အစီအစဉ်ဆွဲပြီး ကျွန်တော်တို့က စနစ်တကျ စီစဉ်ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုလို့ရှိရင် ဒီလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် နေပြည်တော်မှာ ဗုံးကွဲမှု မဖြစ်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်"ဟု အဆိုပါ အကြီးအကဲက ပြောသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဗုံးကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးရသူများ၊ ဒဏ်ရာရသူများနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကို အထူးစာနာကြောင်း၊ ထိုဖြစ်ရပ်အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်းနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သေကျေဒဏ်ရာ ရစေသည့် ဗုံးခွဲမှုကို ရှုတ်ချကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ဤပို့စ်မှာ မြန်မာ့မီးရထား၏ ရထားများ အချိန်မမှန်မှုနှင့်သာ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ပါကြောင်း။)
Posted by BS News at 10:28 PM 1 comments
Posted by BS News at 1:51 PM4comments
နယူးဇီလန်ရှိ မြို့တစ်မြို့မှာ မြန်မာအမည် ဥက္ကလံမြို့ (Auckland) ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ :D
ထိုနည်းတူ ဥက္ကလံ တိရစ္ဆာာန်ဥယျာဉ်တွင် "မြန်မာ" (Burma) ဟု အမည်ရသော အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် ဆင်မ တစ်ကောင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။
Posted by BS News at 1:00 PM 1 comments
ရန်ကုန်တွင် နိုက်ကလပ်နှင့် အနှိပ်ခန်းများ လိုင်စင်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ နိုက်ကလပ်တွေနဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေဟာ အထူး ခွင့်ပြုချက် လိုင်စင်နဲ့ ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်နေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မေလ ၁၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ အစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ မီဒီယာ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြည်တွင်း သတင်းထောက် တစ်ဦးရဲ့ "ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ နိုက်ကလပ်တွေနဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေကို ဘယ်လို လိုင်စင်မျိုးတွေ ထုတ်ပေးနေသလဲ၊ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ခွင့်ပြုနေသလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုအစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အခုလို ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ဆိုင်ရာ ပိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သူတို့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်အတွင်းကနေ လိုင်းကြေး ယူပြီး အထူး ခွင့်ပြုချက် လိုင်စင်တွေ ချပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်းကြေး ပေးရင် နိုက်ကလပ်တို့ အနှိပ်ခန်းတို့ကို မည်သူ မဆို လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါတယ်။ အလှပြင်ဆိုင်လို့ တရားဝင် အမည်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရပေါ့ဗျာ။ စည်းကမ်းပြည့်ဝစွာ လိုင်းကြေးပေးရင် ဘာမဆို လွတ်လပ် အဆင်ပြေ လွယ်ကူ ပါတယ်" လို့ အစိုးရ အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူက ဖြေကြားသွားပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်း ဆိုသည်မှာ ပိုက်လိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်ကဆို
ပိုက်လိုင်း၏ တစ်စိတ်တဒေသ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ် တွေ့ရသော သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း တစ်ခု
(ကာတွန်း - ဇီးကွက်မျက်ပြူး)
ဆိပ်ကမ်း ဆိုသည်မှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း၏ တစ်စိတ်တဒေသ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း တစ်ပုဒ်တွင် တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပိုက်လိုင်း မှာ ဆိပ်ကမ်းထက် အရွယ်အစား အဆမတန် ကြီးမားမည်ဟု ယူဆရသည်။ မြန်မာပြည်မှ တရုတ်ပြည်အထိ သွယ်တန်းသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း၏ ရှည်လျားမှုကို သတင်းများနှင့် ပူးတွဲပါရှိသည့် မြေပုံများတွင် တွေ့ရသော်လည်း အဆိုပါ ပိုက်လိုင်းများ၏ ယခုကဲ့သို့ အရွယ်အစား ကြီးမားမှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြခြင်း မရှိပေ။ အောက်ပါ သတင်းမှာ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း၏ အရွယ်အစား ပမာဏ မည်မျှကြီးမားသည်ကို ဖော်ပြသော ပထမဆုံး သတင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
Posted by BS News at 1:41 AM0comments
Posted by BS News at 9:10 PM4comments
အမေရိကားရောက် ကမ္ဘာကျော် မြန်မာတစ်ဦးဖြစ်သည့် မင်းသားကြီး အာနိုး ရွှေဝါဇနက္က (သူ့အကြောင်း ဖတ်ရန်) အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် အမေရိကားမှ မြန်မာများ ဒေါသထွက်နေကြသည်။
သူ၏ နေအိမ်အမှုထမ်း အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့် တိတ်တိတ်ပုန်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ကလေးတစ်ဦး မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း မေလ ၉ ရက်နေ့က ဇနီးသည်နှင့် လမ်းခွဲပြီးနောက်၊ အာနိုးက ၀န်ခံလိုက်ကြောင်း အေပီ သတင်းဌာနက ယနေ့ ဖော်ပြသည်။ ထိုကိစ္စကြောင့် မြန်မာလူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေသည်ဟု ယူဆသဖြင့် အာနိုးကို အထူးဒေါသ ထွက်ကြောင်း ကယ်လီဖိုးနီးယား မြန်မာကွန်မြူနတီမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့သော မကောင်းသတင်းကြောင့် မင်းသားကြီး အာနိုး ရွှေဝါဇနက္ကအား BSN တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြား မြန်မာလူမျိုးများ စာရင်း ထည့်သွင်းထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် ၄င်းက ဆက်လက် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ရေချိုးခန်းသုံး အဆင့်မြင့် ပစ္စည်းများ လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေချိုးခန်းသုံး အဆင့်မြင့် မိန်းကလေးများ လား ??
ရေချိုးခန်းသုံး အဆင့်မြင့် အ၀တ်အစား တွေလား ??
လား ?? လား ?? လား ??
Posted by BS News at 1:14 AM 1 comments
အကျဉ်းကျခံနေရသူများကို သမ္မတကြီးက ထောင်ဒဏ် Discount ပေးလိုက်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ် ၂၈/၂၀၁၁ အရ ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသူများကို တစ်နှစ်ကြီးများတောင် Discount လျှော့ပေါ့ ပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by BS News at 11:36 PM3comments
ဘတ်စ်ကား စီးသူများ ငွေအကြွေ ပြန်မအမ်းမည်ကို စိုးရိမ်ရန် မလိုတော့
ရန်ကုန်မြို့တွင်း သွားလာနေသော ဘတ်စ်ကားစီး ခရီးသည်များ အနေဖြင့် စပါယ်ယာထံမှ ငွေအကြွေ ပြန်မအမ်းမည်ကို စိုးရိမ်ရန် မလိုတော့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများအား ငွေအကြွေ လဲလှယ်ပေးရာတွင် ယာဉ်လိုင်းအလိုက် ယာဉ်အစီးရေ ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ခွဲဝေလဲလှယ်ပေးလျက် ရှိပြီး ခရီးသည်တင် ယာဉ်တစ်စီး တစ်ပတ်လျှင် ရရှိသည့် ငွေအကြွေမှာ ကျပ် ၂၀၀၀ ကျော်ခန့် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ထို့ကြောင့် မော်တော်ယာဉ် တစ်စီး တစ်ရက်လျှင် ရရှိသည့် ငွေအကြွေ ပမာဏမှာ ၂၈၅ ကျပ် ၇၁ ပြား ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသည်တင် လိုင်းကား တစ်စီး အနေဖြင့် တစ်ရက်လျှင် အလွန်များပြားသော ပမာဏဖြစ်သည့် ငွေအကြွေ ၂၈၅ ကျပ်ကျော် ဗဟိုဘဏ်မှ ရရှိသဖြင့် ခရီးသည်များကို ငွေအကြွေ ပြန်အမ်းရန် လွန်စွာ အဆင်ပြေသွားကြောင်း၊ လိုင်းကားစီး ခရီးသည်များ အနေဖြင့်လည်း စပါယ်ယာများထံမှ ငွေအကြွေပြန်အမ်းသည်ကို လွယ်ကူ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လက်ခံရရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by BS News at 7:17 PM 1 comments
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးလည်းဖြစ်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယ အတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်သူ မစ္စတာ နံပြားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ရှိသမျှ ပိုက်ဆံများ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသွားကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ပိုက်ဆံ တပြားမျှ မရှိတော့သဖြင့် မစ္စတာနံပြား မြန်မာပြည်မှ မထွက်ခွာမီ လမ်းဘေး ဈေးသည်တဦးကဲ့သို့ ဗန်းကလေး ခင်းပြီး ဈေးရောင်းခဲ့သည်။ အပြန်လမ်းခရီးတွင် ထမင်းစားစရိတ် ရလိုရငြား ရှိစုမဲ့စု ကက်ဆက် အဟောင်းများနှင့် အမ်ပီသရီးများကို ယခုကဲ့သို့ အောက်ဈေးဖြင့် ချရောင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ နံပြားက ပြောသည်။ (အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ထိုကဲ့သို့ လုပ်နေကျဟုလည်း ၄င်းက ရှင်းပြသည်)။
မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်စဉ် အတွင်း စားစရာ မရှိလောက်အောင် အဘယ်ကြောင့် ပိုက်ဆံများ တပြားတချပ်မျှ မကျန်ဘဲ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသွား သနည်း ဟူသော BSN သတင်းထောက်၏ မေးခွန်းကိုမူ မစ္စတာ နံပြားက ဖြေကြားရန် ငြင်းဆိုသည်။
Posted by BS News at 12:42 AM 1 comments
လိုကယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဆိုက်ဘာကာဖေး လော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ပြန်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ (PAC)အင်တာနက်ဆိုင်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်ကမ်းချက် (အသစ်)များကို ယခုလအတွင်း စာတိုက်ကနေတဆင့် အင်တာနက်ဆိုင်များသို့ ပေးပို့နေပါသည်။ ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် အချက်(၁၂)ချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင့်လွင်ကို အိမ်သာနတ်တို့ မတွေ့ဆုံပဲ မေးမြန်းခန်း ဖွင့်လိုက်ပါသည်။
အိမ်သာနတ်။ ။ ဦးတင့်လွင်ခင်ဗျာ ဆက်သွယ်ရေးကနေ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို စည်းကမ်းချက်တွေ ပို့တယ်လို့ ကြားပါတယ်ခင်ဗျ။
ဦးတင့်လွင်။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ စတင်လုပ်နေတဲ့ လိုကယ်လိုက်ဇေးရှင်း ပလန်ထဲက လိုကယ်ဆိုက်ဘာကာဖေး လောရဲ့ ခြေလှမ်းအစပါ။
အိမ်သာနတ်။ ။ ဘယ်လိုမျိုး လိုကယ်လိုက်ဇေးရှင်းလဲ ခင်ဗျ။
ဦးတင့်လွင်။ ။ ဒီလိုလေ၊ မောင်ရင် အခုထုတ်လိုက်တဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို ကြည့်ရင် တခြားနိုင်ငံနဲ့ မတူညီတာတွေ၊ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ မရှိသေးတာတွေ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
အိမ်သာနတ်။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါကတော့ သိပ်ကို ထင်သာမြင်သာ တွေ့ရပါတယ်။
ဦးတင့်လွင် ။ ။ အဲဒါက လိုကယ်လိုက်ဇေးရှင်းလေ၊ အင်တာနက်ကို မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ပြုတာ။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာတွေသုံးတာ မြန်မာဆန်ရမယ်။ မကိုက်ညီတဲ့ အင်တာနက် ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဆန်ရှင် လုပ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် လိုကယ်လိုက်ဇေးရှင်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့ အခုလို စည်းကမ်းချက်တွေ စထုတ်လိုက်တာပါ။
အိမ်သာနတ်။ ။ ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ ဒီအထဲမှာပါတဲ့ အချက်တစ်ခုက ဆိုင်ထဲကကွန်ပျုတာတွေမှာ floppy drive, CD drive, USB port နဲ့ တခြား external drive တွေ တပ်ဆင်အသုံးမပြုရဘူး လို့ပါတယ်။ အခုခေတ် အခုဆိုင်တွေမှာသုံးတဲ့ စက်တွေက အဲဒါတွေပါပြီးသားပဲလေ။ အဲဒီ့ကိတ်စကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှာလဲခင်ဗျ။
ဦးတင့်လွင်။ ။ မကြာခင်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကနေ မြန်မာမှုပြု ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Mainframe system တွေ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခိုင်းမှာပါ။ အဲဒီ့ခါကျရင် ဆိုင်တွေမှာ စက်တစ်လုံး ၀ယ်တပ်ရ၊ ပျက်ရင်ပြင်ရ စရိတ်တွေ သက်သာသွားမှာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ Mainframe စက်ကို ဆိုင်ရဲ့ အော်ပရေတာခုံမှာ ထားရပါမယ်။ ကျန်တာတော့ တဆိုင်လုံးမှာ လူတွေသုံးဖို့အတွက် မော်နီတာ၊ ကီးဘုတ်နဲ့ မောက်စ်တွေပဲ ထုတ်ထားပေးရပါမယ်။ အဲဒီ့အခါကျရင် ဆိုင်တွေမှာ နေရာလဲရှင်း၊ ၀န်လည်းကျဉ်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကအစ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
အိမ်သာနတ်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်ဗျာ။ အဲဒါဆို လာသုံးတဲ့သူတွေက ဓါတ်ပုံဖြစ်စေ၊ ဖိုင်ဖြစ်စေ တခုခု ပို့ချင်တာရှိရင်ကော။
ဦးတင့်လွင် ။ ။ အဲဒါအတွက်က မိန်းဖရိန်စက်မှာပဲ ရှိတာပါ။ အော်ပရေတာက တဆင့် သွားရပါလိမ့်မယ်။
အိမ်သာနတ်။ ။ လာသုံးတဲ့သူတွေက ဖိုင်တွေဘာတွေ သိမ်းထားချင်ရင်ကော။
ဦးတင့်လွင် ။ ။ အဲဒါကလဲ အော်ပရေတာက တဆင့် သွားရမှာပါ။
အိမ်သာနတ်။ ။ အိမ်ကနေ ရိုက်ကူးလာတဲ့ အီးမေးလေးတစောင်လောက်ကို ကော်ပီကူးပြီး ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကောဗျာ။
ဦးတင့်လွင်။ ။ အဲဒါကလဲ အော်ပရေတာကတဆင့် သွားပေါ့ဗျာ။
အိမ်သာနတ်။ ။ စည်းကမ်းချက်ထဲမှာ လာသုံးသူတွေရဲ့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ မှတ်ရမယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဦးတင့်လွင်။ ။ အဲဒါကလဲ အော်ပရေတာကတဆင့် လုပ်ရမှာဗျ။
အိမ်သာနတ်။ ။ နောက်ပီးတော့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဘာလုပ်၊ဘယ်သွားစတဲ့ ရက်ကော့ဒ်တွေ၊ စကရင်ရှော့တွေ တလတကြိမ် ဆက်သွယ်ရေးကို ပို့ရမယ်ဆို။
ဦးတင့်လွင်။ ။ အဲဒါကလဲ အော်ပရေတာဆင့် လုပ်ရမှာလေ။
အိမ်သာနတ်။ ။ ပီးတော့ တာဝန်ရှိသူတွေက ၀င်စစ်ဆေးမယ်၊ စည်းကမ်းတွေမကိုက်ညီရင် လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတဲ့အထိ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ အရေးယူမယ်ဆိုပါတော့။
ဦးတင့်လွင်။ ။ အဲဒါပဲလေ.. ဆိုင်တွေမှာ အော်ပရေတာတွေမှာ တာဝန်အရှိဆုံးပဲလေ။ ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်း ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးက မင်းပြောင်းမင်းလွှဲ ဖြစ်ပြီ။ ဒီအချိန်မှာ မသိနားမလည်တဲ့ အင်တာနက်ယူဇာတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ထိခိုက်စေမယ့် အမှားတွေ မသိပဲမလုပ်မိအောင် ထိန်းသိမ်းပေးရေမယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ကလည်း ကလင်း ဂါးဗားမင့်၊ ဂွတ် ဂါးဗားမင့်လို့ ဆိုထားတော့ ကျုပ်တို့ကလည်း ကလင်းဆားဗစ်၊ ဂွတ်ဆားဗစ်တွေ ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါမှလဲ ကလင်းအင်တာနက်၊ ဂွတ်အင်တာနက်၊ ကလင်း စီတဇင်၊ ဂွတ်စီတဇင်တွေ ဖြစ်လာကြမှာပေါဗျာ။
အိမ်သာနတ်။ ။ ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့... ဒါနဲ့ အရင်တခေါက် အင်တာဗျုးတုန်းကလေ ဂျီတော့ထက် သာတဲ့ ဆားဗစ် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက လုပ်မယ်ဆိုတာလေ၊ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်ပီလဲခင်ဗျ။
ဦးတင့်လွင်။ ။ ကျုပ်တို့က ဂျီတော့ထက် ပိုမြန်အောင် သားပိုက်ကောင်တော့ လုပ်တာလေ။ အဲဒီ့ သားပိုက်ကောင်ဗျာ ဟိုတစ်နေ့က အင်တာနက်ကျောရိုးကြီးပေါ် တက်ခုန်နေလို့ ပြန်လိုက်ပြင်နေရတာ ငါးနာရီလောက် ကြာသွားလို့ ကာစတန်မာတွေဆီကို အကြောင်းကြားစာ ပို့လိုက်ရသေးတယ်။ အခုတောင် သူခုန်ခဲ့တဲ့ အရှိန်မသေသေးလို့ စပိက မမှန်ချင်သေးဘူး။
ဒါပဲဗျာ။ ခင်ဗျား မေးခွန်းတွေ သိပ်များနေပြီ။ ကျုပ်တို့က နိုင်ငံတော်အတွက် မနားမနေ အလုပ်များနေတာ.. ဒါပဲ ဒါပဲ
အိမ်သာနတ်။ ။ ဟုတ်...
ဂွပ် တီ တီ တီ တောက်
(အိမ်သာနတ် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်)
Posted by BS News at 9:43 PM0comments
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ အကြီးအကဲ ပြင်သစ်လူမျိုး၊ အသက် ၆၂ နှစ် အရွယ်ရှိ အဖိုးကြီး Dominique Strauss-Kahn သည် နှာဘူး ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများတွင် တွေ့ရသည်။ သူသည် ပြင်သစ် သမ္မတလောင်းအဖြစ် အရွေးခံရန် အလားအလာ ရှိနေသည့် အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်း ဖြစ်သည်။
သူသည် သူတည်းခိုခဲ့သည့် ဟော်တယ်မှ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ဟော်တယ်အခန်း သန့်ရှင်း ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်သူ အမျိုးသမီးတဦးအား အဓမ္မကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းချက်အရ နယူးယောက်မှ ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်နေသည့် လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆွဲချကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ပြင်သစ်လူမျိုးများသည် ကပ်စီးနည်းသူများ ဖြစ်ကြရာ မြန်မာ ယောက်ျား ပြည့်တန်ဆာ နှစ်ဦးကိုလည်း နှာဘူးထပြီးနောက် ပိုက်ဆံမပေးသည့် ဖြစ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည် (Click Here)။
Posted by BS News Reporter at 9:09 PM0comments
အမေရိကန် ကွန်ပျူတာတွေ အိပ်ငိုက်၊၊ DV ကံစမ်းမဲပေါက်သူများကို မှားယွင်းရွေးချယ်
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ DV ကံစမ်းမဲ ရွေးချယ်သည့် ကွန်ပျူတာများ အိပ်ငိုက်သွားကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ အိပ်ငိုက်သွားသည့်အတွက် DV ပေါက်သူများကို အမှားမှား အယွင်းယွင်း ပေါက်ကရ ရွေးချယ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ အရောက်လာခွင့် ဗီဇာမဲဖောက်ရာတွင် ကွန်ပျူတာများ အိပ်ငိုက်သွားမှုကြောင့် လူထောင်ပေါင်းများစွာကို မဲပေါက်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ အသိပေးခဲ့မိသည့် အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက တောင်းပန်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် လူပေါင်း ၁၅ သန်းနီးပါး၏ လျှောက်လွှာများကို ပြန်လည် စိစစ် ရွေးချယ်ရလိမ့်မည် ဟုဆိုသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ကံစမ်းမဲ ပြန်လည်ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က ပေါက်တယ်လို့ အပြောခံရသူတွေ အခု မပေါက်တော့ပါဘူး။ ဘွာတေး- ဘွာတေး လို့ပဲ ပြောပါရစေ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ဆီက ကွန်ပျူတာတွေ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ သူတို့ အိပ်ငိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် ခုလို ဖြစ်သွားရတာပါ။ အခု ကွန်ပျူတာတွေကို အိပ်မငိုက်အောင် ကော်ဖီ တိုက်ထားပါပြီ။ ဒီတကြိမ်မှာတော့ သူတို့ အသေအချာ ရွေးချယ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။" ဟု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
Posted by BS News Reporter at 11:27 PM6comments
နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားသို့ မြို့တော် ပြောင်းရခြင်း အကြောင်းရင်း
တရံရောအခါက ရန်ကုန်ဟု အမည်ရသော ဒဂုံမြို့ကို အခြေစိုက်သည့် မြန်မာပူရ နိုင်ငံတော် မင်းတြားကြီး တစ်ပါး အိပ်မက် မြင်မက်တော်မူသည်။
အိပ်မက်ထဲတွင် အလွန်ကြီးမားသော ဆင်ကြီး တစ်ကောင်က ဘုရင်ကြီး၏ ခေါင်းကို တက်နင်းသွားသဖြင့် ဘုရင်မင်းတြားကြီး၏ ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး ပြားသွားသည် ဟူ၏။
အိပ်ရာမှ နိုးသော်၊ ဘုရင် မင်းတြားကြီး အလွန်ထိတ်လန့်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် အနီးအနားတွင် ခစားသည့် သမား၊ ဟူးရား၊ ပုဏ္ဏားဖြူ၊ ပုဏ္ဏားညိုများကို မင်းတြားကြီးက မေးမြန်း အကြံတောင်း၏။
ပုဏ္ဏားတစ်ဦးက အကြံပြု အခါတော်ပေးလိုက်သည်။
"မင်းတြားကြီးကို ဆင်ကဲ့သို့ အကောင်ကြီးကြီး မပြောနဲ့ ပျားလို အလွန်သေးငယ်တဲ့ အကောင် သေးသေးလေးတောင် မနင်းစေရဘူး။ ဒီတော့ ပျားမနင်း- ပျဉ်းမနား ဆိုတဲ့အတိုင်း မြို့တော်အား ပျဉ်းမနားသို့ ပြောင်းတော်မူပါ"
ထို့ကြောင့် မြို့တော်သစ်ကို ပျဉ်းမနားမြို့အနီးသို့ မင်းတြားကြီး ရွှေ့ပြောင်းတော် မူလေသတည်း။
(တက္ကသီလာမှ ဒိသာပါမောက္ခကြီးတစ်ပါး ပြောပြဖူးသည်ကို ပြန်လည် တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်)
Related Article about the new Capital ..
Posted by BS News at 6:39 PM2comments
ဂူးဂဲလ်နှင့် ဖေ့ဘွတ် ရန်ဖြစ်၊ ဘလော့တွေ ရပ်တန့်သွား
ဂူးဂဲလ်နှင့် ဖေ့ဘွတ် ရန်ဖြစ်နေကြသည်။ ဖေ့ဘွတ် တည်ထောင်သူ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် မဇကာပေါက် နှင့် ဂူးဂဲလ် စီအီးအို လယ်ရီ ပေ့ခ်ျတို့ ရန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဂူးဂဲလ်မှ support လုပ်ထားသည့် ဘလော့စနစ် ယမန်နေ့က ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားသည်။
"ဒါ ကျွန်မနဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဂူဂဲလ်က မြန်မာတွေကို ရန်ငြိုးထားပြီး မြန်မာ ဘလော့တွေကို ဖတ်မရအောင် လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု မဇကာပေါက်က မြန်မာပီပီ ဒေါသတကြီး ပြောသည်။
ယမန်နေ့က မြန်မာ ဘလော့များ အပါအ၀င် အခြား ဘလော့များလည်း ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
"သူတို့ နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတာ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ပို့စ်တင်လို့ မရဖြစ်နေတော့၊ ဒီနေ့ အနားရတော့ပေါ့။ လယ်ရီပေ့ခ်ျက ဘလော့ဂါတွေ ပင်ပန်းမှာ စိုးလို့ အခုလို လုပ်လိုက်တာ ထင်ပါတယ်။ အနားယူနိုင်ကြစေဖို့ စေတနာနဲ့ လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်မှာပါ " ဟု BSN မှ တောက်တိုမယ်ရ ဇီးကွက်မျက်ပြူးက မျက်လုံးပြူးပြကာ ပြောသည်။
BSN တွင် ၁၃ မေ၊ နေ့စွဲဖြင့် ည သန်းခေါင်ယံခန့်က ပို့စ်နှစ်ခု တင်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ ပို့စ်များ တစ်ရက်တာ ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။
Posted by BS News at 1:42 PM0comments
၂၀၀၂ ခုနှစ်က မန္တလေးမြို့ ဆေးရုံကြီးတွင် အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ခဲ့သော ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိစပ်နေသည့် အမြွှာညီအစ်မ မိုးမမအောင်နှင့် မိုးပပအောင်တို့ အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ညီအစ် နှစ်ဦး၏ အမည်သစ်မှာ မျိုးပပ နှင့် မျိုးမမ ဖြစ်သည်ဟု သတင်းတစ်ပုဒ်က ဆိုသည် (Click Here)။
မြန်မာနိူင်ငံတွင် ရင်ချင်းဆက် အမြွှာများအဖြစ် မနန်းစိုး၊မနန်းစံကို ၁၉၇၁ တွင် ခွဲစိတ်ပေးခဲ့သည်။ နောင်အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြာသောအချိန် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ရင်ချင်းဆက် အေးအေးငြိမ်း နှင့် အိအိငြိမ်း တို့ကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပေးနိူင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် မိုးမမအောင် နှင့် မိုးပပအောင် ညီအစ်မကို မန္တလေးမြို့ ဆေးရုံကြီးတွင် အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ စိုပြေ၀င်း နှင့် စိုပြေလင်း ညီအစ်မတို့ကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ယခု တစ်ဖန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ချောင်းဦးမြို့တွင် ရင်ချင်းဆက် အမြွှာညီအစ်မနှစ်ဦးကို မေလ ၆ ရက်နေ့က မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရင်ချင်းဆက်များ ခွဲစိတ်မှုကို theludupost တွင် ဖတ်ရန် ..
Posted by BS News at 1:13 AM0comments
ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ် မရှိတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ထိပ်တန်း သတင်းစာကြီး
မြန်မာအစိုးရရဲ့ ထိပ်တန်း သတင်းစာကြီးဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ် မရှိဘဲ အလကားရတဲ့ ဂျီမေးလ်ကို တရားဝင် အီးမေးလ် လိပ်စာအဖြစ် အသုံးပြုနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာကြီးဟာ ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ် မရှိတဲ့ နိုင်ငံတော် အဆင့် သတင်းစာကြီး အဖြစ် ကမ္ဘာ့ သတင်းစာများအကြားမှာ သမိုင်းမှတ်တမ်း ၀င်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂင်းနစ် မှတ်တမ်း စာအုပ်ကြီးကလည်း ဒီအချက်ကို မှတ်တမ်း တင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
"Burmese Regime Newspaper does not even have own email -
they are using GMAIL as official contact" လို့ မိုးမခ မှာ ရေးသား တင်ဆက်ထားတာကို
Posted by BS News at 12:36 AM0comments
မြန်မာ့လေကြောင်းမှာ အလွန်အချိန်မှန်သည့် လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်
"ကျွန်တော် စီးဖူးတဲ့ မြန်မာ့လေကြောင်းကတော့ နေ့လည် ၁ နာရီထွက်မယ်ပြောတယ်။ တစ်ကယ်ထွက်တော့ ညနေ ၄ နာရီ ပါခင်ဗျ။ အရမ်းအချိန်မှန်ပါတယ်" ဟု မြန်မာ့လေကြောင်းဖြင့် ခရီးသွားဖူးသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
"ဟုတ်ကဲ့၊ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းက အိန္ဒိယကို မနှစ်က တနှစ်တခေါက်နှုန်း ပြေးဆွဲလို့ပါ။ ယခုနှစ်ကစပြီး တနှစ်နှစ်ခေါက်နှုန်း ပျံရတာမို့ အချိန်တိကျမှုနှုန်း ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားမှာကို နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်။" ဟု သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိတစ်ဦးက ပို့စ်မော်ဒန်နည်းဖြင့် ဖြေကြားသည်။
မြန်မာ့လေကြောင်းမှာ ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်များသာ ပြေးဆွဲနေသော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပျံသန်းပြေးဆွဲသည့် လေကြောင်းလိုင်းများအနက် အချိန်မှန်သည့် လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းကို ထူးဆန်းစွာ ခံခဲ့ရသည်။
Posted by BS News at 10:33 PM0comments
ကြွပ်ကြွပ်အိတ် မသုံးရ၊ ကြွိကြွိအိတ်များ သုံးစွဲနိုင်
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း မပြုရန် သက်ဆိုင်ရာက အမိန့်ထုတ်ပြန်သည် (Click)။
မြို့တော်ဝန်သစ် ဦးလှမြင့်က "ကြွပ်ကြွပ် ကြွပ်ကြွပ်" ဟု အသံမြည်သော ပလတ်စတစ်အိတ် အသံများကို နားမခံသာ သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ တားမြစ် ပိတ်ပင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဘာမှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များကို တားမြစ်သော်လည်း "ကြွိကြွိ" ဟု အသံမြည်သော ပလတ်စတစ် အကြည်အိတ်ပျော့များမှ ထွက်သော အသံကိုမူ မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်က ဂီတသံနှင့် တူသည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည် (Click Here)။
ပလတ်စတစ် အကြည် အိတ်ပျော့များသည်လည်း ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အနည်းနှင့်အများ ထိခိုက်နိုင်သော်လည်း recycle လုပ်နိုင်သည်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျော့နည်းသည်ဟု အကြောင်းပြကာ ဦးလှမြင့်က ခွင့်ပြုလိုက်သည် (Click)။ မည်သို့ပင် အကြောင်းပြစေကာမူ ကြွိကြွိအိတ်မှ ထွက်သော ဂီတသံကို ဦးလှမြင့် နားဝင်ပီယံ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ခွင့်ပြုခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အကြီးအကဲ တစ်ဦးက BSN ကိုပြောပြသွားသည်။
Posted by BS News at 12:26 AM0comments
အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို ရှင်းလင်းပြီးနောက် အမေရိကန်လေတပ် အင်အား ဆယ်ပုံတစ်ပုံ အထိလျှော့ချ
အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို ရှင်းလင်း သုတ်သင်ခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန်လေတပ် ကို မူလ အင်အား သုံးသိန်း သုံးသောင်းခန့် (Click Here) မှ သုံးသောင်း သုံးထောင်ကျော်သို့ လျှော့ချလိုက်ကြောင်း သတင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်တွင် ရေးသားသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်မလာနိုင်တော့ဟု ယူဆသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အင်အား လျှော့ချခြင်း ဖြစ်ပုံရသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အမေရိကန် လေတပ်အနေဖြင့် F-22 (Falcon) လေယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ကြောင်း အဆိုပါ ဆောင်းပါးက ဖော်ပြသည်။ လေယာဉ် အမျိုးအစားသစ် သတင်းကြောင့် အမေရိကန် လေတပ်တွင် ဂယက်ရိုက်သွားသည်။ လောလောဆယ် အနေအထားတွင် F-22 Raptor လေယာဉ်အမျိုးအစားသာ ရှိသေးသဖြင့် ယခု အသစ်ပေါ်ပေါက်လာသော F-22 (Falcon) လေယာဉ်ကို မည်သူက မည်သူ့အတွက် မည်သို့မည်ပုံ ထုတ်လုပ်ခဲ့သနည်း ဆိုသည်ကို သိနိုင်ရန် အတွက် ကော်မရှင် တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းကာ စုံစမ်း စစ်ဆေးရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ယာယီ တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် မစ္စတာ နံပြား (Vijay Nambiar) သည် မေလ ၁၂ ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့တွင် မြန်မာပြည်ကို ရောက်ရှိမည်ဟု သိရသည်။
"နံပြား ရောက်လာရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ မနက်စာ အဖြစ် လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း နံပြား စားကြတာပေါ့" ဟု မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးသစ် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ပြောသည်။
သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်ကမူ နံပြား သိပ်မကြိုက်သဖြင့် မစ္စတာနံပြား အနေဖြင့် တွေ့ခွင့်ရမရ မသေချာ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by BS News at 1:28 AM0comments
မြန်မာတရုတ် အာကာသသိပ္ပံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်အရ မြန်မာအာကာသယာဉ်မှူးတစ်ဦးကို တရုတ်ပြည်မှာ လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို ဧရာဝတီ ဘလော့ မှာ တင်ပြထားပါတယ်။
Posted by BS News at 10:32 PM0comments
မုန်တိုင်းဆိုတာ အကောင် တစ်ကောင်ဖြစ်သည်ဟု မိုးဇလ ညွှန်ချုပ်ပြော
မုန်တိုင်း ဆိုသည်မှာ အကောင် တစ်ကောင် ဖြစ်ကြောင်း မိုးဇလ ညွှန်ချုပ် ဦးချစ်ကျော်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ အဆိုပါ အကောင်ကြီးတွင် "မုန်းတိုင်းမျက်စိ" ဟူသော မျက်စိ ပါဝင်ပြီး မြင်မြင်သမျှ အရာများကို ဝှေ့ယမ်း ဖျက်ဆီးတတ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဂစ်နှင့် ဂီရိ ဟူသော အကောင် နှစ်ကောင်ကြောင့် အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် များစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသည်။
၁၉၅၆ ခုနှစ်က သာသနာနှစ် ၂၅၀၀ ပြည့် အခမ်းအနားများနှင့် အတူ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ပွဲ ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရသည်။
သို့သော်၊ နှစ်ပေါင်း ၅၅ နှစ်အကြာ ခရစ်နှစ် ၂၀၁၁ တွင် ကြာသောအခါ သာသနာတော် သက္ကရာဇ် ၁၅၅၅ ဖြစ်သွားပြီး နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင် ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုနှစ်မှာ အေဒီ ၁၀၁၁ ဖြစ်သွားပြီး ပုဂံခေတ် ပတ်ဝန်းကျင် အချိန်ကာလသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားသည်။
"မဖြစ်သေးဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ပုဂံခေတ် ပြန်ရောက်သွားရင် အရည်းကြီးတွေကို ကြောက်တယ်" ဟု ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ဦးက သူ၏ ကောင်မလေးကို လက်တွဲမဖြုတ်ဘဲ ပြောသည်။
ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး သမားတစ်ဦးကမူ ရှေးခေတ်သို့ ပြန်ရောက်သွားသည်ကို ကြိုဆိုလိုက်သည်။
"နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင် နောက်ဆုတ်သွားတော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ပုဂံခေတ်ကနေ ပြန်စကြတာပေါ့။ အခုဆိုရင် အေဒီ ၁၀၁၁ လေ၊ အနော်ရထာမင်း နန်းမတက်သေးဘူး။ ဒီတော့ ပုဂံခေတ်ကို ပြန်စမယ်။ ပဒေသရာဇ်စနစ်ထဲက မကောင်းကွက်တွေကို ဖယ်ရှားမယ်။ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော် ကြာတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်ဆီမှာ ကိုလိုနီ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်။ အာဏာရှင် စနစ် မပေါ်ထွန်းအောာင် ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပန်းကြမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနှစ် တစ်ထောင် အချိန်ရတာပဲဗျာ။ အေးဆေးပဲပေါ့" ဟု ၄င်းက ရှင်းပြသွားသည်။
လွန်ခဲ့သော အနှစ်တစ်ထောင်ဆီ သွားကြည့်ရန် ..
Posted by BS News at 3:11 PM6comments
ရာမာယဏ ဇာတ်တော်မှ ရာမ မင်းသား စိတ်ကြွဆေးများ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စိတ်ကြွဆေးကို ရာမစိတ်ကြွဆေးဟု ခေါ်ဆိုကြောင်း သတင်း တစ်ပုဒ်က ဆိုသည်။
"စာစီစာရိုက်သူတွေ အမှတ်တမဲ့မို့ စာလုံးပေါင်း မှားသွားတာ ဖြစ်မှာပါ။ ရာမမင်းသား စိတ်ကြွဆေး ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲ- ယမမင်းကြီး စိတ်ကြွဆေး ဖြစ်ဖို့များတယ်" ဟု ဂျာနယ်လစ် တစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။
ရာမ မင်းသား၏ ညီတော်ထုတ်လုပ်သော လက္ခဏ စိတ်ကြွဆေးကိုမူ မတွေ့ရသေးပေ။
Posted by BS News at 11:03 AM 24 comments
တယ်လီဖုန်းလိုင်း သန်း ၃၀ တိုးချဲ့မှုကြောင့် CDMA ဖုန်း ချပေးမှု ရပ်ဆိုင်းသွား
မြန်မာ အစိုးရသစ်၏ ၁/၂၀၁၁ အထူးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စု ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းက တယ်လီဖုန်းလိုင်းများကို သန်း ၃၀ အထိ တိုးချဲ့မည်ဟု ပြောဆိုလိုက်သည်။
ထိုကဲ့သို့ သန်း ၃၀ စတင် တိုးချဲ့လိုက်သဖြင့် ငါးသိန်းတန် CDMA 450 MHz နှင့် 800 MHz ဖုန်းများကို အများပြည်သူသို့ ချပေးနေမှု ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး၊ ငါးသိန်းတန်ဖုန်းများမှာ ခြောက်သိန်းတန် ဖုန်းဘ၀ သို့ ချက်ချင်းရောက်ရှိသွားသည်။
မြန်မာပြည်တွင် တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ တိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် လိုင်းမကျပ်စေရန် လည်းကောင်း၊ တယ်လီဖုန်းများကို တစ်ဦးတည်း လက်ဝါးကြီးအုပ် ဖြန့်ဖြူးနေသည့် သေဌေးကြီး ဦးတေဇကို ဦးသိန်းစိန်က ကြည့်မရသောကြောင့် လည်းကောင်း ဖုန်းချပေးမှု ရပ်ဆိုင်းရသည်ဟု အချို့က သုံးသပ်ကြသည်။
Posted by BS News at 1:31 PM0comments
Al-Quada အမည်ရှိသည့် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အသစ်တစ်ခု မကြာသေးမီက ပေါ်ပေါက်ကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအဖွဲ့ကိုလည်း အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကပင် ခေါင်းဆောင်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by BS News Reporter at 11:50 AM 1 comments
မြန်မာပြည်တွင် သုံးစွဲနေသော ပိုက်ဆံများတွင် ရောဂါပိုးများ မတွေ့ရ
post link: royal-myanmar.com
မြန်မာပြည်မှ ပိုက်ဆံများမှာ အမှိုက်တွေကိုစုပြီး ကော်ကပ်ထားသလို ဖွာရရာ ကြဲနေပြီး အရောင်မထွက်၊ ညစ်ပေနေကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော ပိုက်ဆံမျိုးကို အိန္ဒိယတွင်လည်း တွေ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါ အိန္ဒိယ ပိုက်ဆံများကို ဓာတ်ခွဲကြည့်သောအခါ ကာလသားရောဂါပိုး အမျိုးမျိုး၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ဂနိုပိုး၊ ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်စေသည့် အီးကိုလိုင်းပိုးများကို တွေ့ရကြောင်း ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညိုက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ရေးသားသည်။
သို့သော် မြန်မာပြည်မှ ချေးအထပ်ထပ် တက်နေသည့် ညစ်ပတ်သော ပိုက်ဆံများတွင်မူ ရောဂါပိုး တစ်စုံတရာမျှ တွေ့ရခြင်း မရှိဟု သိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် "ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း မရှိသောကြောင့်" ဟု သူကဆိုသည်။
Posted by BS News Reporter at 11:14 AM4comments
ဦးသိန်းစိန် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွား
ယနေ့ မေလ ၇ ရက် (၁၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း ဂျာကာတာမှ ပေးပို့သော၊ ပို့စ်မော်ဒန် သတင်း တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
အင်ဒိုနီးရှားမှ ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဆိုသော ဦးသိန်းစိန်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေဖွယ် ရှိကြောင်း အတည်မပြုရသေးသော သတင်းတစ်ပုဒ်က ဆိုသည်။
ဦးသိန်းစိန် နှင့် ရုပ်ချင်းအလွန်ဆင်တူသူ တစ်ဦးကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ၊ တစ်ခုသော MRT အနီးတွင် ဖိနပ်တိုက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု အဆိုပါ MRT အနီးသို့ ရောက်ရှိ်ခဲ့သူ မြန်မာပြည်သား တစ်ဦးက BSN သို့ ဓာတ်ပုံနှင့် တကွ သတင်းပေးပို့ထားသည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မည်သူမည်ဝါဟု အတိအကျ အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
Posted by BS News at 12:03 AM5comments
မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများမှာ အလုပ်သမားများသာဖြစ်ကြောင်း သမ္မတကြီးကဖော်ပြ
(Kyay Mon, 1 May 2011)
မေလ ၁ ရက် အလုပ်သမားနေ့ သ၀ဏ်လွှာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများကို အလုပ်သမားကြီးများဟု အထက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ ညွှန်းဆိုသွားသည်။
သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများမှာ အလုပ်သမားများဖြစ်ကြပြီး၊ မြန်မာပြည်သို့ ပြည်ပမှ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ နိုင်ငံခြားသားများနှင့်၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်သူများမှာ အလုပ်ရှင်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု သမ္မတကြီး အနေဖြင့် ဆိုလိုကြောင်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်သူ ပြည်ပ အနွယ်ဝင်များမှာ အလုပ်သမားများ မဟုတ်ကြဟု သမ္မတကြီးက ဆိုလိုသည်။
မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများစွာမှာ ပြည်တွင်း တွင်သာ မက ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်ပါ အလုပ်သမားများ အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းကြောင့် သမ္မတကြီးက ယခုကဲ့သို့ ၀န်ခံ သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း အပါအ၀င် လူမျိုး (၁၃၅) မျိုးကို တိုင်းရင်းသား ဟု တရားဝင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။)
Posted by BS News at 7:38 PM0comments
(Photo: Burmese Spirits)
ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် အထက်ပါ အတိုင်း အများပြည်သူ ကို သတိပေးထားသည်။
"ဒါ- တိုင်းပြည် လုံခြုံမှု မရှိဘူး ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာဗျ။ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရမယ့် ဘုရား ရင်ပြင်လို နေရာမျိုးမှာတောင် မိုင်းခွဲမှာ ကြောက်နေရတယ် ဆိုတော့ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ မြန်မာပြည် မတည်ငြိမ်သေးဘူး ဆိုတာ သက်သေပြနေတာပဲ" ဟု အမည်မဖော်လိုသူ မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
"အခုလို မိုင်း (Mind) သတိ စာတန်း ရေးထိုးထားတာက ဘုရားဖူးမျှော်တဲ့ ပြည်သူအပေါင်းကို တရားရစေဖို့ အသိပေးထားတာပါ။ မိမိတို့ရဲ့ Mind (စိတ်)ကို သတိနဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး တရား ဘာဝနာ ရှုမှတ်စေဖို့ အသိပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘုရားရင်ပြင်တော်ကြီးဟာ ဆိုရင်ဖြင့် အလွန်တရာမှ တည်ငြိမ်အေးချမ်း လုံခြုံမှု ရှိတဲ့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ မိုင်း (Mind) ဆိုတဲ့ စိတ်ကို သတိတရား၊ အသိတရား ထားပြီး တည်ငြိမ်စွာနဲ့ တရားဘာဝနာရှုမှတ် ပွားများဖို့ အလွန် သင့်လျော် လှပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုလို စာတန်း ချိတ်ဆွဲထားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဂေါပက လူကြီးတစ်ဦးက ရှင်းပြသွားပါသည်။
Posted by BS News at 11:48 AM2comments
(၀င်ငွေ ကျပ် ၁ သန်း သတင်း)
တစ်လလျှင် ၀င်ငွေ ၁ သန်း ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဈေးသက်သာသည့် ငါးသိန်းတန် တယ်လီဖုန်းများကို ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်က ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ တစ်လ ၁ သန်း ၀င်ငွေရှင်များမှာ နောက်ထပ် စီမံကိန်းဖြင့် တယ်လီဖုန်းလိုင်း ၄ သန်း တိုးချဲ့ချိန်၊ တယ်လီဖုန်းများ ယခုထက် ပိုမို ဈေးကျသော အခါတွင်မှ ဖုန်းကိုင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ သတင်းက ဆိုသည်။
အထက်ပါ သတင်းအရ ငါးသိန်းတန်ဖုန်းများကို အသုံးပြုသူများမှာ တစ်လ ၀င်ငွေ ၁ သန်းကျပ်ထက် များစွာ ပိုမိုလိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ၀င်ငွေ အထူးမြင့်မားနေကြပြီဟု အဆိုပါ သတင်းအရ မှတ်ယူနိုင်သည်။
"အများသူငါ ငါးသိန်းတန် ဖုန်းကိုင်နေချိန်မှာ၊ တစ်လ ၁ သန်း ၀င်ငွေရှိသူတွေ ဖုန်းမကိုင်ဘူး ဆိုတော့ ဒီလူတွေ တော်တော် ကပ်စီးနည်းလို့ ဖြစ်ရမယ်" ဟု မြေနီကုန်းတွင် ကွမ်းယာရောင်းနေသူ တစ်ဦးက မှတ်ချက်ချသည်။
တယ်လီဖုန်း တစ်လုံး ငါးသိန်းကျပ် ဟူသော ပမာဏမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အတော်အတန် ဈေးကြီးနေသေးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ပြည်သူလူထုကမူ ဈေးသက်သာသည်ဟု ယူဆလျက် ရှိကြပြီး လူဦးရေ အတော်များများ အသုံးပြုလျက်ရှိကြသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြန်မာပြည်၌ တယ်လီဖုန်းလိုင်း ၂ သန်းကျော် ရှိသည်။
Posted by BS News at 4:41 PM3comments